Generator Mametraka mpanamboatra - China Generator Mametraka Mpamatsy & Factory
Ny Cummins dia manana foibe any Columbus, Indiana, Etazonia. Cummins dia manana masoivoho fizarana 550 any amin'ny firenena 160 mahery izay nanangona vola 140 tapitrisa dolara mahery tany China. Amin'ny maha-mpampiasa vola vahiny lehibe indrindra amin'ny indostrian'ny motera sinoa dia misy orinasa iraisana 8 sy orinasam-pamokarana feno ao Shina. DCEC dia mamokatra mpamokatra génie diesel B, C ary l raha CCEC kosa dia mamokatra mpamokatra diesel M, N ary K. Ny vokatra dia mifanaraka amin'ny fenitry ny ISO 3046, ISO 4001, ISO 8525, IEC 34-1, GB 1105, GB / T 2820, CSH 22-2, VDE 0530 ary YD / T 502-2000 ".
Deutz dia natsangan'ny NA Otto & Cie tamin'ny taona1864 izay fanamboarana motera tsy miankina manerantany miaraka amin'ny tantara lava indrindra. Amin'ny maha-manam-pahaizana momba ny motera feno azy, DEUTZ dia manome maotera milamina sy mangatsiatsiaka amin'ny alàlan'ny herinaratra manomboka amin'ny 25kW ka hatramin'ny 520kw izay azo ampiasaina betsaka amin'ny injeniera, milina mpamokatra, milina fambolena, fiara, lokomotiva amin'ny lalamby, sambo ary fiara miaramila. Miisa 4 ny ozinina maotera Detuz any Alemana, fahazoan-dàlana 17 ary ozinina iraisan'ny fiaraha-miasa eran'izao tontolo izao miaraka amin'ny herinaratra mpamokatra solika diesel manomboka amin'ny 10 ka hatramin'ny 10000 horsepower ary ny herinaratra mpamokatra entona manomboka amin'ny 250 horsepower ka hatramin'ny 5500 horsepower. Deutz dia manana sampana 22, ivon-toerana 18, toby fiasana 2 ary birao 14 manerana an'izao tontolo izao, mpiara-miombon'antoka 800 mahery no niara-niasa tamin'i Deutz tany amin'ny firenena 130.
Daewoo Co., Ltd. dia natsangana tamin'ny 1937. Ny vokatra dia naneho hatrany ny haavon'ny sehatry ny milina Koreana, ary nahavita zava-bita tsara teo amin'ny sehatry ny motera diesel, ny mpitrandraka, ny fiara, ny milina mandeha ho azy ary ny robot. Mikasika ny motera diesel dia niara-niasa tamin'i Aostralia hamokatra maotera an-dranomasina izy tamin'ny 1958 ary nandefa andiana motera diesel mavesatra be niaraka tamin'ny orinasan-dehilahy alemanina tamin'ny taona 1975 ny orinasa Daewoo any Eropa dia natsangana tamin'ny taona 990, Daewoo Heavy Industry Yantai Company dia natsangana tamin'ny taona 1994 , Daewoo Heavy Industry Company any Amerika dia naorina tamin'ny taona 1996. Nanatevin-daharana tamin'ny fomba ofisialy ny vondrona Doosan Doosan any Korea Atsimo i Daewoo tamin'ny volana aprily 2005.
Ny motera diesel Doosan Daewoo dia be mpampiasa amin'ny fiarovam-pirenena, fiaramanidina, fiara, sambo, milina fananganana, milina mpamokatra herinaratra ary saha hafa. Ny fitambaran'ny setran'ny motera diesel Doosan Daewoo dia eken'izao tontolo izao noho ny habeny, ny lanjany maivana, ny tanjany manohitra ny enta-mavesatra fanampiny, ny feony ambany, ny toekarena ary ny fahatokisana azy, ary ny kalitaon'ny asany sy ny famoahana entona mandrehitra mahafeno ny firenena mifandraika amin'izany ary fenitra iraisam-pirenena.
Isuzu Motor Co., Ltd. dia niorina tamin'ny 1937. Ny foibeny dia ao Tokyo, Japon. Ny ozinina dia ao amin'ny tanànan'i Fujisawa, distrika tokumu ary Hokkaido. Malaza amin'ny famokarana fiara ara-barotra sy motera fandoroana anaty anaty. Izy io dia iray amin'ireo mpanamboatra fiara lehibe indrindra sy lehibe indrindra eran-tany. Tamin'ny 1934, araka ny fomban'ny minisiteran'ny Varotra sy ny indostria (ankehitriny ny Minisiteran'ny Varotra, ny indostria ary ny Varotra) dia natomboka ny famokarana fiara ary ny marika "Isuzu" dia nomena anarana taorian'ny renirano Isuzu akaikin'ny tempolin'i Yishi . Hatramin'ny nampiraisana ny mari-pamantarana sy ny anaran'ny orinasa tamin'ny 1949, ny anaran'ny orinasa Isuzu Automatic Car Co., Ltd. dia nampiasaina nanomboka teo. Ho mariky ny fampandrosoana iraisam-pirenena amin'ny ho avy, ny sary famantarana ny klioba dia tandindon'ny endrika maoderina miaraka amin'ny abidy romana "Isuzu". Hatramin'ny niorenany, Isuzu Motor Company dia nirotsaka tamin'ny fikarohana sy ny fampandrosoana ary ny famokarana motera diesel nandritra ny 70 taona mahery. Amin'ny maha iray amin'ireo sampana orinasa telo an'ny Isuzu Motor Company (ny roa ambiny dia sehatry ny orinasa CV sy ny orinasa LCV), miankina amin'ny tanjaka ara-teknikan'ny foiben'ny birao, ny orinasan-tsolika diesel dia manolo-tena amin'ny fanamafisana ny fiaraha-miasa stratejika manerantany. ary ny fananganana mpamokatra motera diesel voalohany an'ny indostria. Amin'izao fotoana izao, ny famokarana fiara ara-barotra Isuzu sy motera diesel no laharana voalohany manerantany.
MTU, sampana iray an'ny vondrona Daimler Benz, no mpamokatra motera diesel mavesatra indrindra eto an-tany, mankafy ny haja ambony indrindra amin'ny indostrian'ny motera. Amin'ny maha-solontenan'ny kalitao avo indrindra an'io orinasa io mandritra ny 100 taona mahery, ny vokatra dia be mpampiasa amin'ny sambo, fiara mavesatra, milina fanaovana enjeniera, lokomotiva amin'ny lalamby sns ... toy ny mpamatsy ny tany, ny rafitra an-dranomasina sy ny lalamby ary ny milina mpamokatra gazoala, malaza amin'ny teknolojia mitarika, vokatra azo antoka ary serivisy kilasy voalohany ny MTU
Ny vokatra motera diesel Perkins dia misy, andiany 400, andiany 800, andiany 1100 ary andiany 1200 ho an'ny fampiasana indostrialy ary andiany 400, andiany 1100, andiany 1300, andiany 1600, andiany 2000 ary andiany 4000 (miaraka amina modely entona voajanahary marobe) ho an'ny famokarana herinaratra. Perkins dia manolo-tena amin'ny vokatra kalitao, tontolo iainana ary mora vidy. Ireo generator Perkins dia mifanaraka amin'ny ISO9001 sy iso10004; ny vokatra mifanaraka amin'ny fenitra ISO 9001 toy ny 3046, ISO 4001, ISO 8525, IEC 34-1, gb1105, GB / T 2820, CSH 22-2, VDE 0530 ary YD / T 502-2000 ”Sy fenitra hafa
Perkins dia natsangana tamin'ny taona 1932 avy amin'ny mpandraharaha anglisy, Frank. Perkins any Peter borough, UK, dia iray amin'ireo mpanamboatra motera manerantany. Izy io dia mpitarika tsena an'ny diesel ivelan'ny arabe sy mpamokatra entona voajanahary 4 - 2000 kW (5 - 2800hp). Perkins dia mahay mandanjalanja ny vokatra mpamokatra ho an'ny mpanjifa hahafeno tanteraka ny filany manokana, noho izany dia atokisan'ny mpamokatra fitaovana. Ny tambajotra manerantany misy mpiasan'ny Perkins mihoatra ny 118, manarona firenena sy faritra maherin'ny 180, dia manome ny fanohanan'ny vokatra amin'ny alàlan'ny toeram-pivarotana 3500, ireo mpizara Perkins dia manaraka ny fenitra faran'izay henjana indrindra hahazoana antoka fa afaka mahazo ny serivisy tsara indrindra ny mpanjifa rehetra.
Shanghai MHI (indostria mavesatra Mitsubishi)
Mitsubishi Heavy Industry dia orinasa Japoney izay manana tantara 100 taona mahery. Ny tanjaka ara-teknika feno voangona ao amin'ny fampandrosoana maharitra, miaraka amin'ny haitao maoderina sy ny fomba fitantanana, no mahatonga ny Mitsubishi Heavy Industry ho solontenan'ny indostria mpamokatra Japoney. Mitsubishi dia nandray anjara betsaka tamin'ny fanatsarana ny vokatra avy amin'ny indostrian'ny fiaramanidina, aerospace, masinina, fiaramanidina ary air-air. Manomboka amin'ny 4kw ka hatramin'ny 4600kw, ny andian-tsarimihetsika Mitsubishi misy setroka haingam-pandeha haingam-pandeha sy haingam-pandeha dia miasa manerana an'izao tontolo izao ho toy ny famatsiana herinaratra mitohy, mahazatra, miady ary ny tampon'ny fiharatra.
Yangdong Co., Ltd., sampana iray an'ny China YITUO Group Co., Ltd., dia orinasa mpiray tsikombakomba manokana amin'ny fikarohana sy ny fampandrosoana ny motera diesel sy ny famokarana faritra, ary koa ny orinasa teknolojia avo lenta.
Tamin'ny 1984, ny orinasa dia nahomby tamin'ny famolavolana ny motera diesel 480 voalohany ho an'ny fiara any Shina. Taorian'ny fivelarana nandritry ny 20 taona mahery, izy io dia iray amin'ireo toby famokarana motera diesel marobe isan-karazany miaraka amin'ny karazany, fika ary habe ao Shina. Izy io dia manana fahaizana hamokatra motera diesel 300000 isan-taona. Misy maherin'ny 20 ny karazana motera diesel maro karazana, miaraka amin'ny savaivony 80-110mm, famindrana 1.3-4.3l ary fandrakofana herinaratra 10-150kw. Vita soa aman-tsara ny fikarohana sy ny fampandrosoana ny vokatra motera diesel mahafeno ny fepetra takiana amin'ny fitsipiky ny famoahana Euro III sy Euro IV, ary manana zon'olombelona manana fahalalahana mahaleo tena tanteraka. Ny motera diesel amin'ny angovo misy hery matanjaka, fahombiazana azo antoka, toekarena sy faharetana, fihoaram-pahefana ary feo ambany, dia nanjary fahefana tian'ny mpanjifa maro.
Ny orinasa dia nandalo ny fanamarinana rafitra kalitao iraisam-pirenena ISO9001 ary ny mari-pahaizana rafitra kalitao ISO / TS16949. Ny motera diesel multi-silinder kely niteraka ny mari-pankasitrahana fanadinana kalitaon'ny vokatra nasionaly, ary ny vokatra sasany dia nahazo ny fanamarinana EPA II an'ny Etazonia.
Niorina tamin'ny 1951, Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. dia manana foibe any Yulin City, Guangxi, miaraka amin'ireo sampana 11 eo ambany fahefany. Ny tobim-pamokarana dia any Guangxi, Jiangsu, Anhui, Shandong ary toerana hafa. Izy io dia manana ivon-toerana iraisana R&D sy sampana marketing any ivelany. Ny fidiram-bola varotra isan-taona feno dia mihoatra ny 20 miliara yuan, ary ny fahaizan'ny famokarana isan-taona ny motera dia mahatratra 600000 set. Ny vokarin'ny orinasa dia misy sehatra 10, milina 27, maotera, salantsalany ary motera diesel lehibe ary motera misy entona 60-2000 kW. Io no mpanamboatra motera misy vokatra betsaka indrindra ary karazana karazany feno indrindra ao Shina. Miaraka amin'ny toetoetran'ny herinaratra avo, avo torque, fahamendrehana avo, fanjifana angovo ambany, tabataba ambany, famoahana ambany, fampifanarahana matanjaka sy fizarazaran-tsena manokana, ny vokatra dia lasa fahefana mpanohana ho an'ny kamio lehibe indrindra eto an-toerana, fiara fitateram-bahoaka, milina fananganana, milina fambolena , milina fandefasana sambo sy milina famokarana herinaratra, fiara manokana, kamiaonety, sns. eo amin'ny sehatry ny fikarohana maotera, ny orinasa Yuchai dia nibodo hatrany ny haavon'ny kaomandy, nitaona ny namany hanangana ny motera voalohany mihaona ny fitsipika nasionaly momba ny famoahana 1-6, mitarika ny revolisiona maitso amin'ny indostrian'ny motera. Izy io dia manana tambajotra serivisy tonga lafatra manerantany. Izy io dia nanangana faritra fivarotana fiambenana miisa 19, faritra fidirana amin'ny seranam-piaramanidina 12, faritra ivoahan'ny sambo 11, biraon'ny serivisy sy fivarotana 29 fanampiny, toby serivisy mihoatra ny 3000, ary fivarotana fivarotana kojakoja 5000 any Chine. Izy io dia nanangana birao 16, masoivohon'ny serivisy 228 ary tambajotram-panompoana 846 any Azia, Amerika, Afrika ary Eropa Mba hahatanteraka ny antoka iraisan'ny rehetra.